Ugly Tangerine -China Yixinhe Ukuhweba
Shiranui Ugly Orange eyaziwa Mandarin ugly, ugly eziyinqaba, njalo ngonyaka 2 kuya ku-3 izinyanga abavuthiwe, inyama obucayi futhi kulula ikhasi, nge Ponkan Iphunga, akukho isikhumba elintantayo. Inyama orange, amnandi odongeni ezithambile kanye namanzi, zondile futhi ezithambile. Ayisungula Fujian ukuba Sichuan, lokhu zilwane eqolo ezisawolintshi izinhlobo emakethe Chinese. Izithelo juice ushukela 13-14 degrees, i-asidi ovuthiwe imayelana 1%, ukunambitheka omuhle kakhulu, izinga kakhulu.
Shiranui Ugly Orange izithelo umumo kanye nosayizi izithelo abanalo ukuma esinqunyiwe, izithelo like Sanbao Mandarin, kukhona abavelele entanyeni esifushane, azikho entanyeni esifushane, kungekho entanyeni izithelo flat at enkabeni kakhulu. Yellow Ikhasi orange, imibala maphakathi no-Okthoba, Umbala ogcwele ekuqaleni kuka-December. Yellow Ikhasi, 3.5-5mm obukhulu. Ezivuthiwe izithelo ikhasi kancane olunzima. Kulula ikhasi, nge Ponkan Iphunga, akukho isikhumba elintantayo. Inyama orange, amnandi ezithambile kanye namanzi, udonga mncane kakhulu futhi ethambile, ukunambitheka ecolekile. Izithelo juice ushukela degree 13-14 degrees. ukutshalwa ezahlukene, futhi unga kuze kube degrees 16. asidi Mature imayelana 1%. Ukukhula kwesikhathi izinyanga 2-3, bahlale fresh ukuba phakathi ngasekupheleni ukunambitheka kakhulu Apreli, eliphezulu.
Shiranui Ugly Orange kuyinto uvithamini C, futhi ukulandelela izakhi ukuthi umzimba womuntu needs.Per amagremu 100 equkethe kilojoule 36,89, 9,02 amagremu ama-carbohydrate, 0 amafutha, 0,82 amagremu amathathu amaprotheni, 1,64 amagremu cellulose.Nutritional Inani lingaphezulu kakhulu ukwedlula efanayo fruit.Shiranui Ugly Orange kungasiza ukukhiqiza ngamathe futhi slake ukoma ne kakhulu ukudla, kwaso kwezokwelapha okusezingeni eliphezulu, izithelo ezinhle ngentengo zomsebenzi. Ugly orange ikhasi kungaba imithi ngemva omisiwe wasibeka in the esiqandisini kungaba isiqedaphunga.
Isitolo esidayisa yonke impahla Shiranui Tangerine